The Gardener: Haze News In Singapore (20-21 June 2013)
အရေးကြီးတယ်ထင်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ အချိန်နဲ့အမျှ ကျွန်တော်တင်နေတာတွေကို ဒီမှာ စုစည်းလိုက်ပါတယ်။ အများစု သိသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။
Wednesday near Singapore
ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်တို့တတွေ သေရတော့မှာပါလား။
ပင့်ကူလူသားက သူ့မြို့လေးကို ကာကွယ်သလို၊ လင်းနို့လူသားကက ဂေါ်ဿမ်ကို ကာကွယ်သလို သစ်ပင်လေးအနည်းငယ်ဟာ မြို့ငယ်လေးတစ်ခုကို အသံတိတ်ကာကွယ်နေလေရဲ့။
23 hours ago near Singapore
စလုံးကလူတွေ ဘိုးဘွားတွေအတွက် စက္ကူမီးရှို့လွန်းလို့ ဝဋ်လည်တဲ့အထဲ ကိုယ်တွေက ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါရတာပဲ။ မိုးနတ်မင်းကြီးကလည်း ရွာတော်မမူသေးဘူး။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်မှန်းသိရင် အလုပ်ကထွက်ပြီး mask လက်လီလက်ကားရောင်းတဲ့အလုပ် နှစ်ပတ်လောက်လုပ်ပြီး ကြီးပွားနိုင်ချေရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ mask တွေကို MRT မှာ ဝေရင် ပျော်စရာကောင်းမှာပဲ။ အခုတလော ဆိုင်တွေမှာ မေးလိုက်ရင် mask? ဆိုတာနဲ့ finished ready တဲ့။ ဆရာဝန်အပြောအရတော့ အိမ်မှာပဲ နားနေရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။ အဆုပ်မကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ သတိထားကြပါ။
သတင်းအရတော့ စင်ကာပူကလူတွေ အားမငယ်ကြပါနဲ့။ အင်ဒိုနီးရှား Dumai မှာဆို ဒီနေ့ PSI 400 တဲ့။
Henry Zephyr sharedalink.
မနေ့ကအထိတော့ ရှို့နေတုန်းလို့သိရပါတယ်။ ဆက်ရှို့သွားမယ့်ပုံလည်းရှိပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားလို ခပ်ဖျင်းဖျင်းအစိုးရရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ အစိုးရကို မျှော်လင့်ရင်တော့ခက်ပါတယ်။ သတင်းထောက်ကိုတောင် ခြိမ်းခြောက်လိုက်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်လှေကိုယ်ဖောက်တာ မင့်အပူလားဆိုတဲ့ အထာမျိုးကို အခုခေတ်အထိ လူဖျင်းတွေမှာတွေ့ရပါသေးတယ်။ အစိုးရက ထိထိရောက်ရောက်တားမြစ်ထားပုံမရပါဘူး။ သစ်တောဝန်ကြီးကလည်း သူတို့ကို အပြစ်တင်လို့မရဘူး။ သူတို့နဲ့ အလုပ်လုပ်ရဦးမှာလို့ နှာသံလေးနဲ့ပြောသွားတယ်လို့တခြားသတင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ref:http://www.straitstimes.com/breaking-news/se-asia/story/business-usual-dumai-locals-waiting-face-masks-20130619
ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာနဲ့ တို့ထိလို့မရတဲ့ စီးပွားရေးသမားတို့ဟာ အမြဲ တွဲလျက်သားသွားတာပဲ။ အင်ဒိုနီးရှားဟာ စီးပွားရေး တဟုန်ထိုးတိုးတက်လာသလောက် အမြော်အမြင်ကတော့ တဟုန်တိုး ဂုံးဆင်းနေတာပဲ။ တောကို မီးရှို့ပြီး ဆီအုန်းစိုက်တယ်။ တရားမဝင်ရှို့တာကို အစိုးရက မဖြေရှင်းနိုင်သလိုလို၊ မဖြေရှင်းပဲ မျက်စိမှိတ် လစ်လျူရှုထားပေးသလိုလိုဖြစ်နေရာက အခုအချိန်မှာပိုဆိုးကုန်တယ်လို့သိရတယ်။ မီးသတ်ကားတွေ လွှတ်ထားလိုက်ပါပြီလို့တော့ပြောတယ်။ မီးသတ်ကားလွှတ်၊မလွှတ်က ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ haze တွေ ဘယ်နေ့အထိရှိနေဦးမှာလဲဆိုတာကမှ ပြဿနာ။ မလေးရှားမှာတော့ ဝန်ကြီးက အခြေအနေပိုဆိုးလာစရာရှိတယ်ဆိုပြီး PSI နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူထုကို အသိပေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဘ နှဖူးသိုက်တူးတာထက်တောင်ဆိုးတယ်။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဘက်ကို ရောက်သွားကုန်ကြပြီထင်တယ်။ ဒီလို စီးပွားရေးသမားတွေကို ထောက်ခံပြီး စားသုံးနေဖို့မကောင်းဘူး။ company နာမည်တွေ ထုတ်ပြန်တဲ့အခါ သေချာမှတ်ထားပြီး တစ်သက်လုံး မစားဘဲ ဆန္ဒပြရမယ်။ စာအုန်းဆီကိုတော့ လုံးဝမစားဘူး။ ဆီကနေ ထုတ်တဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေကိုပါ မသုံးမိအောင် သတိထားရမယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ တခြားလူတွေအတွက် မကြည့်ဘဲ ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းကို ရှုတ်ချပါတယ်။ အဲဒီလို စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ ပေါင်းရိုက်ပေါင်းစား အစိုးရများလည်း ကျရှုံးစေချင်ပါတယ်။
ဒီသတင်းတစ်ခုကတော့ မင်္ဂလာနည်းနည်းရှိပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ တိမ်တုစိုက်ပျိုးခြင်းလို့ ခေါ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ မိုးရွာဖို့ကြိုးစားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒါဆို မီးတွေ ငြိမ်းပြီး haze တွေ သက်သာဖို့ရှိပါတယ်။ cloud seeding အတွက် အလှူငွေ လာကောက်ရင်တော့ ထည့်လိုက်မယ်စိတ်ကူးတယ်။ http://www.straitstimes.com/breaking-news/se-asia/story/haze-update-indonesia-use-rain-making-technology-stop-fires-20130619
3 hours ago near Singapore
PSI reading နဲ့ပတ်သက်ပြီး အနည်းအများတွေကို မရှင်းလင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မနေ့ကမှ ဖတ်မိတာနဲ့ အခုမှ ပြန်သတင်းပို့နိုင်ပါတယ်။ PSI က လေထဲမှာ ပါတဲ့ အနည်မှုန်အကြီးကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဆုပ်ထဲဝင်လောက်တဲ့ ဆံချည်မျှင်ထက် ၁၃ စလောက်သေးငယ်တဲ့ အမှုန်တွေကိုတိုင်းတာကိုကြတော့ PM2.5 တိုင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေက အရင်တုန်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့စနစ်တွေလို့သိရပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ AQI ဆိုလား၊ အဲဒါကို ပြောင်းသုံးပြီလို့သိရပါတယ်။ PSI နည်းတယ်များတယ်ဆိုတာ အမှုန်အကြီးပါဝင်မှု နည်းတယ်များတယ်လို့သာဆိုလိုပါတယ်။ လေထုထဲမှာ အဆုပ်ထဲရောက်နိုင်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကိုတော့ PM2.5 နဲ့တိုင်းတာတယ်လို့သိရပါတယ်။ မလေးရှားမှာတော့ PM2.5 အတိုင်းအတာကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာတဲ့အတွက် မတူသလိုဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်တော့ လေထုအခြေအနေက တကယ်ဆိုးနေတာပါ။ နှစ်ပတ်ကနေ တစ်လအထိ အနည်းဆုံးကြာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ သတင်းအသစ်တွေဖတ်မိရင်လည်း share ပါဦးမယ်။ (လေးစားစွာဖြင့် Z)
2 hours ago near Singapore
နောက်တစ်ခါ အလုပ်လျှောက်ရင် PSI 400 အထိ အလုပ်လုပ်နိုင်တာလေးပါ ထည့်ရေးလို့ရပြီ။
Henry Zephyr shared သနပ်ခါးမေ's status.
စင်္ကာပူမှ အစ်မ၊ ညီမနဲ့ သူငယ်ချင်းများ -- အဝတ် ဒါမှမဟုတ် ဖော့ကို ရေဆွတ်ပြီး အနီးမှာထားပေးတာက မီးခိုးစုပ်ပြီး အသက်ရှုကြပ်တာကို ကာကွယ်ပေးပါမယ်။ ရေခြောက်သွားရင် ပြန်ပြန်ဆွတ်ပေးပါ။ အဆင်ပြေရင် လက်ဖက်ကို ထားပေးပါ။ အနံစုပ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်။
56 minutes ago near Singapore
PSI ကို ၄၀၀ အထိပဲ တိုင်းတာဖို့ သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ မနေ့ကဖတ်လိုက်ရတယ်။ ၄၀၀ နဲ့ ၄၀၁ ဟာ ဘာမှမထူးဘူး။ ၃၀၀ ကို အပြတ်အသတ်ကျော်သွားကတည်းက မကောင်းတော့တာပဲ။ ၃၀၀ နဲ့ ၂၉၀ နဲ့လည်း ဘာမှမကွာဘူး။ အခုဟာက အင်ဒိုနီးရှားမှာ လောင်တာရော၊ ရှို့တာပါ ရပ်ဖို့ကို လုပ်မှ ဒီဘက်က သက်သာမှာ။ မဟုတ်ရင်တော့ urgent leaves2ပတ်ယူပြီး ရန်ကုန်မှာ လေပြန်ရှူဖို့စဉ်းစားရတော့မယ်။ အဖြေမရှာဘဲ ပြဿနာပဲရှာနေရင်တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
47 minutes ago near Singapore
ဝမ်းသာစရာသတင်းလို့ပဲပြောရမလားမသိဘူး။ P.M2.5 လိုသေးငယ်လွန်းတာတွေကို မျက်နှာဖုံးတွေက filter က စစ်မထားနိုင်ဘူးဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးဝတ်ထားတယ်ကွ။ သွားချင်ရာသွားလို့ရပြီလို့မတွေးမိစေဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အနည်းအကျဉ်းလောက်တော့ သက်သာစေမယ်ထင်ပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးတပ်ထားလို့ မသက်မသာခံစားနေရတဲ့သူတွေကတော့ သက်သာသလိုသာ နေကြပါ။ တစ်ချို့က မျက်နှာဖုံးတပ်လိုက်မှ ရှူလို့အဆင်မပြေတာဖြစ်တတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဂရုစိုက်ကြပါ။ အပြင်မထွက်ဘဲနေနိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်။ ထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း မြန်မြန်သွား၊မြန်မြန်ပြန်ဝင်ကြပါ။
39 minutes ago near Singapore
ဒါကတော့ အဘလီပြောတာပါ။ စက်တင်ဘာအထိသာ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ကွန်ဒိုတွေအခွံလိုက်ကျန်မှာ။ လူတွေကတော့ နတ်ပြည်ရောက်ကုန်လောက်ပြီပေါ့ အဘရယ်။ သူပြောတာကို စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါ။ ကိုယ့်အထင်နဲ့ကိုယ် တနင်္လာနေ့လောက်ဆိုရင် သက်သာလောက်ပြီတွေးနေကြမှာစိုးပါတယ်။ အဆိုးမြင်တာမကောင်းသလို၊ အမှန်မမြင်တာလည်းမကောင်းပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အမြင်တစ်ခုလို့တောင်ဆိုချင်ပါတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက်မပြောနဲ့ တစ်ပတ်၊နှစ်ပတ်အထိတောင် ရှိနေဦးမယ့်သဘောပါပဲ။ သက်သာသွားဖို့ကိုပဲ မျှော်လင့်ရမှာပါ။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုရှိသူများ ပြင်ဆင်စရာရှိတာလေးတွေ ပြင်ဆင်ကြပါ။
35 minutes ago near Singapore
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono said "all the country's resources" would be mobilised to extinguish the fires. နိုင်ငံမှာရှိသမျှ မီးငြိမ်းသတ်ရေးအင်အားစု၊စက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို မီးတွေငြှိမ်းဖို့ ရွှေ့ရလိမ့်မယ် ....။ လိမ့်မယ် ... လိမ့်မယ် ...၊ တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံ ဘယ်မရွှေ့လိမ့်မယ် ........။ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဆွဲစရာ ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ကလည်းဆွေးနေတယ်ဆိုတာမျိုး။
31 minutes ago near Singapore
"Singapore should not act like children, making all that noise," Coordinating Minister for People's Welfare Agung Laksono said. (ရာထူးကကြီးကြီး၊ လူကပေါပေါဆိုတာ ဒါမျိုးလူတွေ)
27 minutes ago near Singapore
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/06/201362063145903921.htmlဒီမှာ မီးငြှိမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မီးသတ်သမား ၂၀၀ လောက်နဲ့ငြှိမ်းနေတာမနိုင်ဘူးလို့လည်း အယ်လ်ဂျာဇီးယားကနေပြောသွားပါတယ်။ ရေတွေကို ဗုံးကြဲသလို ကြဲချတာလည်း အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တကယ်ငြှိမ်းနေတဲ့သူတွေပြောတာဆိုတော့ ပိုပြီး တိကျပုံရပါတယ်။ အကူအညီတွေကလည်း တောင်းထားတုန်းလို့ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ အသက်ကို မျှင်းရှူရင်းစောင့်ကြပါစို့။
20 minutes ago near Singapore
စင်ကာပူကမဟုတ်တဲ့သူများ status တွေများနေတယ်ဆိုရင် hide ထားလိုက်ကြစေချင်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အသက်ရှူရခက်တဲ့ပြဿနာရှိနေလို့ တွေ့သမျှ သတင်း update မှန်သမျှ ချက်ချင်းတင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ သမ္မတကိုယ်တိုင်ကလည်း အချင်းချင်း ဂရုစိုက်ကြပါမှာထားပါတယ်။ အရေးကြီးပြီဆိုရင်တော့ သွေးစည်းကြရပါမယ်။
ဒီတစ်ခုကတော့ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ bloomberg ကရေးတာဖြစ်လို့ စီးပွားရေးအမြင် နည်းနည်းပိုပါပါတယ်။ သူပြောတာက စင်ကာပူကလူတွေခေါင်းကိုက်မှာမို့လို့ မီးမရှို့ပါနဲ့ဆိုပြီး ဆူမာတြားက ရွာသားရဲ့ ထမင်းအိုးခွဲတဲ့စကားမျိုးမပြောဘဲ၊ သူတို့အတွက် လိုတဲ့အကူအညီလည်းပေးပါမယ်၊ ပညာလည်းပေးမယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတဲ့ win-win အဖြေတစ်ခုကို အကြုံပြုပါတယ်။ အဲဒါသိပ်ကောင်းတယ်ထင်မိတယ်။ အခက်အခဲနဲ့ကြုံလာရင် လူမိုက်က လူမိုက်လို ရှင်းချင်ပြီး၊ ပညာတတ်က ပညာတတ်လိုဖြေရှင်းစေချင်တာကို တွေ့နိုင်တယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင် Haze ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ playlist လေးတောင် ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ The Haze Playlist: